Howlgallo ka dhan ah Al shabaab oo ka socda gobalka Jubbada Hoose – Somali Top News
Howlgallo ka dhan ah Al shabaab oo ka socda gobalka Jubbada Hoose
June 12, 2019 Somali Top News	0 Comments
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee DANAB ayaa waxaa ay howlgallo ka sameeyeen deegaano dhaca duleedka Magalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose,halkaas oo ay ku sugnayeen xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Saraakiisha Hoggaamineysay howlgalkaas ayaa waxaa ay sheegeen inay ku duuleen xog sirdoon oo ay heleen,isla markaana ay howlgallo qorsheysan ka fuliyeen deegaanka Araare oo ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose ee Maamulka Jubbaland.
Taliyaha qeybta Ururka 2aad ee Ciidanka DANAB ee Gobolka Jubbada Hoose Gaashaanle Muraal ayaa sheegay in Ciidanka degan deegaanka Baarsanguuni ay fuliyeen howlgalkaas,isla markaan aay dileen Xubno ka tirsan Al-Shabaab balse dhankooda aan wax khasaaro ah geysan.
Sidoo kale waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in howlgallada ay sii wadi doonaan,isla markaana howlgalkaan ka xiga uu noqon doono deeganka Koban iyo deegaano kale oo ay weli ku sugan yihiin Al-Shabaab.
Mudooyinkii u dambeeyay ayaa Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland ayaa dhaq dhaqaaqyo waxa ay ka wadeen deegaano ka tirsan Gobolada Jubbooyinka halkaas oo ay ku beegsanayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab.
← Dad shacab ah oo lagu dilay magaalada Dhuusamareeb
Dowladda Federalka oo ka hadashay xiisadda ka taagan gobalka Hiiraan →
Ruux Naftiis Hore Ah Oo Isku Qarxiyay Bar-kontrool Dhaca Afgooye
August 5, 2018 Somali Top News 0
Ciidan abaabulan oo weerar ku qaaday deegaanka Ceel Afweyn
November 22, 2018 Somali Top News 0
Al shabaab oo digniin adag u dirtay Dalladaha waxbarasho ee dalka
October 7, 2018 Somali Top News 0